Daraasad la sameeyay waxay muujineysaa dhalinyarada inay cabbaan aalkolo yar laakiin mararka qaar qiiqa doogga badan inta lagu jiro faafida. • Dawooyinka Inc.eu
Maaddaama cudurka faafa ee adduunka uu sii socdo, dhallinyaradu waxay raadinayaan habab cusub oo lagu hagaajiyo booska madaxooda iyagoon isticmaalin qamri tiro badan.
1 Ku saabsan Sahanka Caalamiga ee Daroogada
2 Sheekooyin kala duwan oo ku saabsan cabitaanka khamriga inta lagu jiro COVID-19
3 Laakiin maxaa ku dhacaya dadka cabbay wax ka yar?
4 Oo ka waran dadka in badan cabbay?
5 Isticmaalka daroogooyinka kale
Xiritaanka iyo tallaabooyinka kale ee caafimaadka bulshada ee lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19 dhammaantood nooma kexeynin inaan cabno (iyo daroogooyinka kale), sida warbaahin badan ay nooga dhaadhicin lahaayeen.
De Sahanka Daroogada Caalamiga ah la sii daayay maanta, iyada oo jawaabaha ay ka heleen in ka badan 55.000 oo kaqeybgalayaashu, ay muujinayaan jawaab isku dhafan.
Waxaan ogaanay in dadka qaarkiis ay kordhiyaan isticmaalka khamriga iyo xashiishka inta badan caajis darteed, sida cilmibaaristii horeba ay muujisay.
Laakiin dadka kale waxay yareeyeen cabitaankooda iyo isticmaalkooda daroogada hada xafladaha, goobaha lagu caweeyo ama xafladaha ayaan hada ikhtiyaar u aheyn - isbedelkan ilaa hada helay feejignaan yar.
Ku saabsan Sahanka Caalamiga ee Daroogada
Sahanku wuxuu bixinayaa sawir ah qaababka la beddelay ee khamriga iyo isticmaalka daroogada, suuqyada daroogada iyo isbeddellada kale ee la xiriira daroogada inta lagu jiro aafada.
Dad ka yimid 171 dal ayaa ka jawaabey sahaminta websaydhka, oo lagu heli jirey toban luqadood. Waxay nooleyd toddobo toddobaad, oo ku baahsan May iyo Juun 2020.
Warbixintan, oo ku saleysan jawaabaha 55.811, waxaa ku jira xog laga helay 11 dal oo aan ugu jawaab celin badneyn: Austria, Australia, Brazil, France, Germany, Ireland, Netherlands, New Zealand, Switzerland, United Kingdom iyo Mareykanka.
Dadku waxay dib u milicsadeen sida khamrigooda iyo adeegsiga kale ee maandooriyaha ay isu beddeleen bishii la soo dhaafay (Abriil ilaa Maajo) marka la barbardhigo Febraayo 2020, ka hor inta aan lagu dhawaaqin faafin COVID-19 iyo xiritaanka xiritaanka laga soo saaray waddamada badankood.
Sheekooyin kala duwan oo ku saabsan cabitaanka khamriga inta lagu jiro COVID-19
Muunada Australiyaanka ah ee 1.889 qof inta lagu gudajiray daraasada waxay kakoobantahay inta badan dhalinyarada waaweyn (73% way kayaryihiin 35). Muunada waxay kujirtay awoodaha Australia, oo ay kujiraan 40% oo laga keenay Victoria.
Waxaa la weydiiyay inta jeer ee ay cabaan aalkolo, inta ay cabaan inta lagu gudajiray fadhiga caadiga ah, iyo inta jeer ee ay cabto qamriga: waxaa lagu qeexay inay cabayaan shan ama wax kabadan cabitaan inta lagu gudajiro fadhiga.
Qiyaastii 39% waxay soo sheegeen cabitaan badan marka loo barbardhigo kahor COVID-19, halka tiro lamid ah (37%) ay cabbeen wax kabadan. Wadar ahaan, 17% waxay soo sheegeen cabitaan isku mid ah iyo isku qaddar, halka 7% ay soo sheegeen saameyn isku dhafan.
Tani waxay caqabad ku tahay sheekooyinka jira ee dadku inta badan cabbaan khamri badan inta lagu jiro qufulka. In kasta oo la aqoonsan yahay in dad badani cabbeen wax badan, natiijooyinka waxay muujinayaan jawaab kala duwan.
Laakiin maxaa ku dhacaya dadka cabbay wax ka yar?
Dadka Australiyaanka ah ee soo sheegay cabitaanka waxyar, tani waxay ugu wacan tahay hoos udhaca cabitaanka khamriga.
Xaqiiqdii, 37% waxay soo sheegeen hoos udhaca cabitaanka khamriga, marka la barbardhigo 30% kororka cabitaanka khamriga, halka inta soo hartay 34% ay soo sheegeen in cabitaankooda xad dhaafka ah uu wali sidii yahay.
Marka la fiiriyo sababaha dadka muunada Australia ay u cabbeen wax kayar, sababaha ugu badan waxay ahaayeen inay yaraadeen xiriirkii ay lalahaayeen dadka ay sida caadiga ah wax la cabaan (77%), helitaanka meelaha ay inta badan wax ka cabaan (67%) iyo dadka aan jeclayn inay wax ku cabaan guriga oo kaliya ay la cabaan saaxiibadood (50%).
Waxa kale oo xusid mudan in qayb aad u tiro badan oo ka mid ah kooxdii cabtay horumarin yar oo la soo sheegay ee dhinacyada noloshooda darteed. Kuwaas waxaa ka mid ahaa 52% oo la soo sheegay inay soo hagaagtay dhaqaalaha halka 42% ay sheegeen inay soo fiicnaadeen caafimaadka jirka.
Oo ka waran dadka in badan cabbay?
Wadar ahaan 39% dadka Australiyaanka ah ee tusaalahan kujira ayaa sheegay in ay badiyaa cabbaan, qadar aad u badan kalfadhi kasta iyo / ama inbadan oo cunida badan.
Khamriga cabbayaasha soo sheegey inay qabaan cudurka dhimirka ee la ogaadey (badiyaa niyad jab ama walaac) waxay u badan tahay inay soo sheegaan cabitaan ka badan bishii Febraayo, ka hor intaan la bilaabin xayiraadaha COVID-19.
Australiyaanku shaybaarka u cabbay natiijooyin aad u xun oo laxiriira caafimaadka jirka (55%), caafimaadka maskaxda (36%), shaqo ama waxqabad daraasad halka ay khuseyso (30%) iyo dhaqaalaha (26%).
Saamaynta xun ee caafimaadka jidhka iyo maskaxda ee kooxdani waxay ahayd mid muhiim ah, oo muujineysa halista xulashada aalkolada sidii istiraatiijiyad lagu maareeyo culeyska, welwelka iyo niyadjabka.
Isticmaalka daroogooyinka kale
Isugeyn 49% dadka Australiyaanka ah ee la wareystay ee isticmaalay xashiishka 12-kii bilood ee la soo dhaafay ayaa sheegay in isticmaalkoodu uu kordhay marka loo eego bishii Febraayo, oo ay ku jiraan 25% kuwaasoo sheegay in isticmaalkooda xashiishka uu aad u kordhay "wax badan". Sababaha ugu muhiimsan ee kororkaan waxay lamid ahaayeen khamriga: caajis (66%) iyo waqti dheeri ah (64%).
In kabadan kalabar (55%) dadka isticmaalay xashiishadda ayaa sidoo kale tilmaamay inay hadda u badan tahay inay cunaan xashiishadda keligood marka la barbar dhigo ka hor COVID-19.
Kuwa isticmaalay daroogada sharci darrada ah 12-kii bilood ee la soo dhaafay, MDMA, kookaha iyo ketamiin ayaa ahaa kuwa ugu badan ee ay u badan tahay inay hoos u dhaceen tan iyo intii uusan faafin faafidda. Helitaan la'aanta goobaha lagu caweeyo, xafladaha iyo xafladaha ayaa ahaa sababta ugu badan ee keentay isbadalkan.
Isbeddelada suuqa dawooyinka ayaa sidoo kale la soo sheegay, oo ay ku jiraan 51% jawaabeyaasha Australiyaanka ah ee sheegay in helitaanka guud ee daawooyinka sharci darrada ah ay hoos u dhacday, 29% ayaa sheegay in kororka sicirka daawada iyo 17% ay sheegeen in daahirnimada daroogada ay yaraatay.
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu cawaaqib kala duwan ku yeeshay isticmaalka maandooriyaha. Dadka qaarkiis, oo haddii kale waqti badan ku qaadan lahaa la dhaqanka iyo la shaqeynta dadka kale, waxaa laga yaabaa inay hadda haystaan ​​waqti badan oo ay heli karaan oo aalkolada iyo isticmaalka daroogada kale ay buuxin karaan markan.
Dadka kale, la'aanta marin u helida xafladaha, goobaha lagu caweeyo, xafladaha iyo goobaha kale ee bulshada ee khamriga iyo isticmaalka daroogada sida caadiga ah ka dhacaan ayaa horseeday hoos udhaca waxa loogu yeero cabitaanka badan (ama kooma) iyo isticmaalka dawooyinka sida MDMA, kookaha iyo ketamine .
Dadka qaarkiis, cudurka faafa waxaa laga yaabaa inuu wali qaatay dahaadh lacag ah maxaa yeelay waxay yareeyeen isticmaalkooda maandooriyaha waxayna soo sheegeen natiijooyinka nolosha ka wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, waa inaan ka warqabnaa inaan taageerno dhalinyarada marka xayiraadaha laga qaado, si aan ugu dhiirrigelinno dadka inay ku noqdaan bulshada iyo ka qeybgalka si nabadgelyo leh.
Waxaa jirta halista in dadka yareeyay khamriga iyo dulqaadka daroogada ay aad u cuni doonaan oo ay halista ugu badan tahay inay galaan markay noloshu caadi ku soo noqoto. Si kastaba ha noqotee, marka la eego horumarka hadda jira ee dhibaatada adduunka, tani wali waxay umuuqataa meel fog.
Ilaha waxaa ka mid ah GlobalDrugSurvey (EN), GreenEnt ganacsur (EN), MassiveScience (EN), NDARC (EN)
khamrigaaustraliacannabisdaroogadaEuropadhalinyaradaBoqortooyada IngiriiskaMaraykankaAdduunka oo dhan
CBD oo ah dagaalyahan “Superbug” cusub? Qeybtan marijuana waxay ballan-qaadaysaa fursado sida antibiyootiko.
Baadhitaanka antibiyootikada cusub ayaa horseeday cilmi-baarayaasha musharrax la yaab leh: marijuana compound CBD. "Superbugs" ...
Haddii hal shay rafcaan u yeesho male-awaalka, waa taxane daroogo ah iyo dokumentiyo. Nasiib wanaag ...
Granolalalalaaaaa: wax lagu kariyo cannabis
Marabtaa inaad bilawdo maalintaada farxad iyo nasasho? Ka dib fiiri garabka 'Bakhtii' ...